Imibuzo Yokumaketha Okuqukethwe Ongayibuza Futhi Uphendule | Martech Zone
Imibuzo Yokumaketha Okuqukethwe Ongayibuza Futhi Uphendule
NgoMsombuluko, Disemba 2, 2013 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
Le infographic evela ku-AboutUs ukubuka konke okuqinile kwemibuzo esiyidingayo ukuyibuza njengabakhangisi bokuqukethwe. Endabeni yalokhu okuthunyelwe, ngingaphendula le mibuzo ngale ndlela elandelayo:
Ubani - Izinhloso zethu ngabakhangisi bokuqukethwe abasha nabaphakathi.
Ini - le infographic kwimibuzo eyisisekelo ukumaketha kokuqukethwe kwakho okufanele kuyiphendule.
kuphi - sizoshicilela i-infographic lapha futhi sizokwabelana ngayo kuzo zonke iziteshi zenhlalo, kufaka phakathi Pinterest futhi StumbleUpon.
Nini - sithanda ukushicilela phakathi no-ekuseni ukuxhumana nevolumu ephezulu yabafundi ezweni lonke.
Kungani - isiza sethu saziwa ngokwabelana nge-infographics enkulu yezentengiso futhi sesiyindawo yezinhlobo zabo.
Kanjani - Ukwabelana ngale infographic evela ku-AboutUs kunikeza umaketha wokuqukethwe ngesakhiwo esihle sokwenza isu labo. Ngingathuthela kufayela le- Izinyathelo Ezi-7 Zokusebenzisa Okuqukethwe Okuhle okulandelayo ukuthuthukisa uhlelo jikelele!
Tags: Mayelana NATHIokuqukethwe okuphoqayoinfographic yokuqukethweUkukhangisa Okuqukethweokuqukethwe kokukhangisa infographicKanjaniukumaketha infographicinininilaphongubanikungani
Izinyathelo Ezi-7 Zesu Lokuthengisa Lokuqukethwe Elilungiselelwe
I-Poken: Thuthukisa Izinethiwekhi Emicimbini Yobumbano
Sep 1, 2014 ngo-3: 02 PM
Ngingacishe ngiphikise ukuthi isinyathelo sokugcina (ukusishaya ngempela lesi siqiwu) kungaba ukukhuluma nomuntu u-1-1 ukuze athole phansi kakhulu. Umngani wami ukwenze lokhu noMathewu Bucher - osungule inkampani ephethe kahle yezobuciko kusukela phansi